Wararka Maanta: Khamiis, Oct 18, 2012-Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo si rasmi ah Maanta xilka ugala Wareegay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, C/weli Gaas oo hadal ku furay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay heerarka ay soo martay xukuumaddii uu hoggaaminayay tan iyo markii xilkaas loo magacaabay bartamihii sannadkii hore, isagoo sheegay inay ka shaqeeyeen in Muqdisho lagu qabto doorashada madaxda dalka iyo dastuurka lagu ansixiyo caasimadda.
"Afar iyo toban bilood ka hor markii aan xilka la wareegaynay ciidamadeennu waxay joogeen masaajidka macallin Biya-maaloow, xabbaduna waxay ka dhacaysa jidadka Shaqaalaha, Howl-wadaag iyo Saiydka, maantana Soomaaliya waxay ku socodaa waddadii dhabta ahayd ee isbedelka taasoo looga baxay KMG-nimada," ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee xilka wareejinayay.
Isbarasho dhexmartay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo golihii wasiirrada xukuumaddii hore ee C/weli Gaas kaddib, ayuu Cabdi Faarax wuxuu ku ammaanay xukuumaddii hore waxqabadkeeda, isagoo sheegay inuu rajeynayo in inta dhimanna ay dhameystiraan isaga iyo xukuumadda uu soo dhisi doono.
"Waxaan halkan kula wareegay xilka ra'iisul wasaaraha... waxaana xukuumaddii hore ee Cabdiweli Gaas uu horkacayay uga mahadcelinayaa howshii wanaagsanayd ee ay qabatay, waxaana Alle ka baryaynaa inuu noo garto inaan noqonno kuwii dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaarsiin lahaa meel ka wanaagsan halka ay hadda ku sugan yihiin," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
"Duruufaha aan ku sugan-nahay iyo sida uu xilliga kala guurka u soo socday waa arrin ay caalamka intiisa badan wax iska weydiinayaan. Soomaaliya waxay u socotaa jihadii wanaagsanayd, haddana waxaan rajeynaynaa inaan intaas wax kusii darno," ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xafladda xil wareejinta oo ay ka qaybgaleen mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan ayaa waxaan haddana ku sugnayn madaxweynihii hore ee xukuumaddii KMG ahayd, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo tartankii madaxnimada Soomaaliya looga guuleystay.